GAROWE, Puntland- Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo din u hishiisiinta dowladda Federaalka Somalia, oo maanta kasoo laabtay socdaal hal maalin qaatay oo uu ku tagay degmada Tariikhiga ah ee Eyl oo katirsan gobolka Nugal, ayaa booqasho ku tagay garoonka diyaaradaha Caasumadda Puntland oo dhismihiisu muddo hakad ku jiray.
Socdaalkan oo la xariiray indho indhayn ayaa Wasiirku ku maray Wadada Diyaaraduhu ku ordaan oo hadda maraysa meel gabo-gabo ah.
Booqashadan waxaan ku wehelinayay xubno wasiir Juxa u raacay degmada Eyl oo ku jiraan, Abwaano, Siyaasiyiinta, Dhalinyaro, Qoyskiisa iyo carruurtiisa.
Wasiirka ayaa soo dhaweeyay sida loo dhisayo Garoonka isagoo sheegay inay tahay hormar dalku ku tillaabsaday isagoo farxad ku tilmaamay in caasumadda Puntland yeelato garoon casri ah.
Juxa ayaa sidoo kale u mahadceliyay dowladda ku deeqday lacagta lagu dhisayo iyo sidoo kale xukuumadda Puntland oo ku ammaanay dadaalka ay ku bixisay in mashruucan la hirgaliyo.
Waa booqashadii ugu horaysay wasiirka Arrimaha Gudaha dowladda Federaalka Somalia ku tago garoonkan tan iyo markii loo magacaabay jagadan.
Booqashadan ayaa kusoo aaday xilli wax shaqo ah aysan ka socon garoonka oo dhawaan Madaxweyne Gaas ku wareejiyay lacag gaaraysa Labo Malyan iyo Bar.
Shaqada garoonka ayaa hakatay kadib markii ay dhammaatay wajiga koowaad lacagtii loogu talo galay in lagu dhiso.
Muddo sannad ah ayaa dowladdu sheegtay in shaqadan lagusoo afmeeri doono, walow ay ka badatay. Lama oga xilliga la dhammaystiri doono waqti Guddi ay hormuud kayihiin ganacsato iyo waxgaradka gobolka Nugal ay wadaan in Madaarka laga dhigo mid casri ah oo la isticmaali karo habeen iyo Maalin.
Guddigan ayaa aruurinaya lacag hal Milyan ku dhow oo loogu talo galay in Layr lagu galiyo garoonka si waqtiga habeenkii ah loo isticmaalo.
​Wasiir Juxa oo ka qayb galay buug lagusoo bandhigay Garowe [Sawirro]
Puntland 30.06.2017. 13:18
GAROWE, Puntland- Waxaa xalay xarunta Cilmi Baarista Puntland ee PDRC lagusoo bandhigay Buug loogu magac daray AFKA HOOYO WAA HODAN, oo uu qoray Maxamed Baashe oo kasoo jeeda deegaanada Somaliland kasoo socdaal dalxiis ku joogay todobaadkan deegaanada Puntland.
Soomaliya 13.06.2017. 17:01